Mbudzi 2018 | Save A Train
Mwedzi: Mbudzi 2018
musha > Mbudzi 2018
Nguva yekuverenga: 5 maminitsi 2018 Dzava apera, chinogona kureva chete kuti Krisimasi pedo! Vanhu vachiri haana kugadzirira kuti, asi nekuda Vafambi, zviri kumusoro nguva kuronga rwendo. Kana uri kutsvaka guta zvakanaka kupedza Christmas mu, isu tave…
Nguva yekuverenga: 4 maminitsi Ungave wakanzwa akapoteredza, asi hauna kumbozvitenda. Iyo hurukuro dzeinonaka chitima chikafu, hausi kure nechokwadi - unogona kunyatsonakidzwa nekurumwa kwese kwechitima chako! Vakomana nevasikana, njanji kushumira chikafu chakanaka hachisi a…